Ihe ị ga-eme na agwaetiti Cíes | Njem akụkọ
Mariela Carril | | España, Islands
na Agwaetiti Galician ọzọ zuru okè bụ Agwaetiti Cies, Paradaịs, kaadị ozi mara mma nke na-adọta ndị ọbịa si n'akụkụ nile nke Europe. Nke mere na ha bụ ndị na-azọ ọkwa ka ha bụrụ saịtị ihe nketa ụwa.
Taa, na Akụkọ Njem anyị ga-ahụ ihe ị ga-eme na Cíes Islands.
1 Agwaetiti Cies
2 Ihe ị ga-eme na Cíes Islands
Ọ bụ Agwaetiti kpụrụ site n'agwaetiti atọ, Island nke San Martino, Agwaetiti Faro na Island nke Monteagudo.. A makwaara ha dị ka Illa Norte, Illa do Medio na Illa Sur. Ha bụ àgwàetiti ndị ahụ e hiwere na ngwụcha oge nke atọ: akụkụ nke ụsọ oké osimiri ahụ mikpuru, banye n'oké osimiri ma kpụzie àgwàetiti ndị a.
N'ihi ya, àgwàetiti ndị ahụ bụ n'ezie ọnụ ọnụ ugwu ndị dị n'ụsọ oké osimiri bụ́ ndị mmiri rikpuru. Ọ gbasara àgwàetiti ndị bụ́ ugwu ugwu, ndị nwere nnukwu ọnụ ọnụ ugwu na ọtụtụ ọgba ngwaahịa nke mbibi mgbe nile nke oké osimiri na ifufe. Ejikọtara Isla do Faro na North Island site n'ọdụ ụgbọ mmiri a maara dị ka Playa de Rodas, nke dị mita 1200 n'ogologo, weere dị ka otu n'ime osimiri kachasị mma na Spain.
The Lighthouse Island nwere gburugburu hectare 106 nke elu, Monteagudo gburugburu hectare 189, ọnụ, na San Martino Island nwere nkezi nke hectare 145 karịa ma ọ bụ obere. Ọ bụ ndịda kacha n'ime otu ahụ.
Ebe ọ bụ na 1980 na Cíes Islands bụ a eke ogige, ma kemgbe 2000, ha na-emejupụta National Park nke Atlantic Islands nke Galicia. Ihe mejupụtara ogige a bụkwa agwaetiti ndị ọzọ. Ebe dị n'okpuru mmiri nke gbara ha gburugburu bụ ihe magburu onwe ya, ya na oke ohia nke algae na-acha aja aja, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụghị naanị ya, ma n'elu ma n'okpuru mmiri, ịma mma na ụbara nke ahịhịa mmiri na anụ ọhịa na-abawanye.
Tinye na nleta kwa afọ nke whale, nduru na dolphins na ndepụta maka ịga nke ọma zuru ezu.
Mbụ ị ga-ekwu nke ahụ Nleta nwere oke na ọnụọgụ ka njem nlegharị anya ghara imebi gburugburu ebe obibi. Ya mere, karịsịa n'oge okpomọkụ, ị ga-eme ndoputa. Yabụ, ị ga-arịọrịrị ikike site na Xunta de Galicia site na webụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-azụta tiketi ụgbọ mmiri. Nke abụọ, ebe a ị nwere ike isi ụtọ okike ma n'elu ala ma n'oké osimiri.
Ka anyi bido ihe enwere ike ime n'ala. Enwere anọ ụzọ ụkwụ ịgafe:
Ụzọ Ugwu Lighthouse, nke kachasị ogologo na nke kachasị ewu ewu. Ọ na-agafe kilomita 7 n'ime ihe dịka awa abụọ na ọkara. Ọ bụ ihe isi ike. O nwere echiche dị ebube banyere Baixo Miño.
Ụzọ Porta Lighthouse, obere igwe mmadụ karịa ihe niile mana ọ nwere echiche kacha nso nke oke osimiri. Ọ bụ ụzọ dị mkpirikpi nke kilomita 5, nke enwere ike ime n'ime otu awa na ọkara nke ije ije. Ọ bụ ihe siri ike ma ị nwere ike ịhụ Freu da Porta Rocks na San Martino Viewpoint.
Ụzọ Monteagudo, Ọ dị mma ma ọ bụrụ na-amasị gị ikiri nnụnụ na oké osimiri. Ọ nwere nnukwu echiche nke ọnụ ọnụ ugwu Costa de la Vela ma na-agafe oke ọhịa. Ọ bụ ụzọ dị mkpụmkpụ mana mara mma ma ị nwekwara ike isi na ya rute n'ụsọ osimiri gba ọtọ.
Ụzọ Alto do Principe, kacha nso na kacha mfe, ma na ọmarịcha mma nke dunes, na ọnụ ọnụ ugwu. Ị nwere ike ịnweta osimiri nudist nke Figueiras. Ọ dị kilomita atọ.
okporo ụzọ ndị a ekwe ka ị hụ nnukwu ọnụ ọnụ ugwu kwụ ọtọ, ụlọ ọkụ akụkọ ihe mere eme na ọgba ọgbara ọhụrụ, ma na mgbakwunye na e mere maka ihe ọ bụla ọzọ karịa anya ụtọ, ọdịdị ala ndị a na-eme ka ị chee na ụwa enweghị ike ịdị njọ na ịma mma dị otú ahụ ... e nwekwara osimiri. Osimiri ndị a mara mma ezigbo aja ọcha na mmiri doro anya kristal. Enwere ọtụtụ ohere ịla n'iyi naanị.
Rhodes ọ bụ otu n'ime osimiri kachasị mma, dịka anyị kwuru na mmalite. British kwa ụbọchị The Guardian ọ maara otú e si ekewa ya, ebe ọ bụ na e si kpụrụ ya site n’obere ájá ahụ nke jikọtara abụọ n’ime àgwàetiti atọ ahụ, e wuwo àkwà mmiri ụkwụ iji mee ka ọ maa mma karị. E nwekwara ọdọ mmiri a na-akpọ Lagoa dos Nenos. Bụ a a haziri ahazi ma chekwaa osimiria, ebe Red Cross nọ.
Ọ dị mma ugbu a Na Island nke Monteagudo nwekwara osimiri abụọ, Figueiras na Area da Cantareira.. Na Figueiras onye nwere ike na-eme ịgba ọtọ ma ị nwekwara ike iru ebe ahụ na-aga site na Rhodes, ma ọ bụ site na ụgbọ mmiri nkeonwe. Ọ dịkwa n'agwaetiti Faro Nosa Senora Beach, na mmiri doro anya kristal na ọmarịcha echiche nke agwaetiti San Martiño. N'ikwu okwu banyere San Martino, ebe a bụ osimiri mara mma, nke a na-emebibeghị, mana enwere ike ịnweta ya site na ụgbọ mmiri nkeonwe yana site na ndoputa.
Ngwa ngwa na Monteagudo ị nwere ike ịga na Lighthouse nke o Peito na ọmarịcha ọgba mmiri nke a na-akpọ Furna de Monteagudo. Na nso ụlọ ọkụ a, nke nwere echiche nke Cape Home na Vigo estuary, e nwere ọmarịcha ebe nlele nnụnụ. Ọzọkwa, n'ebe ndịda, e nwere ebe mebiri emebi nke nwere nkume dị ka iko na ocheeze nke aha ya nke ọma. Alto do Principe. Ọdịda nke oké osimiri si ebe a na-adọrọ mmasị.
Na Isla do Faro ọ dịghị otu ụlọ ọkụ kama abụọ: n'ebe ndịda, Ụlọ ọkụ nke A Porta na Faor de Cíes. Ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 180 n'ịdị elu na echiche ha na-enye bụ nanị site na ụwa ọzọ. Ugbu a, anyị kwuru na àgwàetiti ndị ahụ mara mma n'elu na n'okpuru, ya mere ọ bụ oge anyị ikwu banyere ha mma mmiri na n'okpuru mmiri mara mma.
El Maritime - National Park nke Atlantic Islands nke Galicia ọ dị ebube. Àgwàetiti ndị a bụbu ebe mgbaba maka ndị ohi na taa, ọ dịghị onye bi na ha, ya mere nanị ụzọ e si esi ebe ahụ bụ ụgbọ mmiri. Ọ bụ ya mere ha ji bụrụ ogige ntụrụndụ mara mma. ebe a bi ógbè kasị ukwuu nke oké osimiri dị na Europe, e nwere ihe karịrị ụdị 200 nke algae, dunes na ọmarịcha ala. nke a ga-echekwarịrị n'ụgwọ niile.
N'ikpeazụ, ozi bara uru ileta Cíes Islands.
Kedu ka esi esi ruo agwaetiti Cíes? Naanị site n'oké osimiri. N'oge dị elu enwere ụgbọ mmiri na-aga ozugbo na agwaetiti Monteagudo na Faro. Ọ bụrụ na ọ bụghị, enwere nhọrọ ụgbọ mmiri nkeonwe nwere ọnụego dị iche iche dabere na ụbọchị na oge. Ọ dịghị ihe karịrị 20 euro kwa okenye. Ụlọ ọrụ ndị na-enye ọrụ a bụ Nabia Naviera, Mar de Ons na Rías Baixas Cruises. Ị chọkwara ikike ị ga-ahazi na Xunta de Galicia. Site na ụbọchị ekpebiela, a na-arịọ ya site na webụ ma mee usoro ahụ ruo ụbọchị 45 tupu mgbe ahụ. N'ezie, ị ga-azụta tiketi n'ime awa abụọ nke ịrịọ ikike, ma ọ bụghị ya, a ga-akagbu ya.
Ị nwere ike ịma ụlọikwuu na Cíes Islands? Ee, e nwere ebe a mara ụlọikwuu n’agwaetiti Faro, n’akụkụ osimiri Rodas. Ọ na-ewe a ohere nke 40 puku square mita na nwere ikike maka banyere 800 ndị mmadụ. Ị nwere ike iji ụlọ ahịa gị gaa ma ọ bụ debe otu. Opekempe ọnụnọ bụ ụbọchị abụọ na ị nwere ike ịnọ ruo 15. Enwere mmiri ịsa ahụ, nnukwu ụlọ ahịa, ekwentị, ebe a na-elekọta mmadụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ma ọ dịghị ọkụ kpọmkwem, ọ bụ ezie na e nwere ọkụ eletrik iji kwụọ ngwaọrụ anyị.
Enweghị ebe mkpofu ya mere a ga-ebughachikwa ihe mkpofu niile ị na-emepụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ihe ị ga-eme na Cíes Islands